လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦး ဓာတ်ကြိုးနှင့်ထိနေသည့် သွပ်ပြားအား ကိုင်မိရာမှ ဓာတ်လိုက်သေဆုံး – Eleven Media Group
လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦး ဓာတ်ကြိုးနှင့်ထိနေသည့် သွပ်ပြားအား ကိုင်မိရာမှ ဓာတ်လိုက်သေဆုံး
လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦး ဓာတ်ကြိုးနှင့် ထိမိနေသည့် အိမ်မိုးသွပ်ပြားအား ကိုင်မိရာမှ ဓာတ်လိုက်သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သြဂုတ် ၇ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
ဓာတ်လိုက်သေဆုံးသည့် အမျိုးသားမှာ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ညောင်ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သည့် ကို….(၃၅ နှစ်) ဆိုသူ ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သြဂုတ် ၆ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခန့်က နေအိမ်ခေါင်မိုးသွပ်ပြား လန်နေသဖြင့် အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်သို့ တက်ရောက်ပြီး သွပ်ပြားအား ပြုပြင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ပြုပြင်စဉ် လမ်းဘေးမီးတိုင်မှ တစ်ဆင့် ၎င်း၏နေအိမ်ကိုကျော်၍ အခြားအိမ်တစ်အိမ်သို့ သွယ်တန်းထားသည့် ဓာတ်ကြိုးမှာ ပေါက်ပြဲပြီး သွပ်ပြားနှင့် ထိမိနေခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ထိမိနေချိန်တွင် ကို…. မှာ အဆိုပါသွပ်ပြားကို ကိုင်မိရာမှတစ်ဆင့် ဓာတ်လိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းသို့ဓာတ်လိုက်ခဲ့သဖြင့် ကို….မှာ ယာဘက်လက်မတွင် ဒဏ်ရာတစ်ချက်ရရှိခဲ့ကာ ပန်းလှိုင်ဆေးရုံမှတစ်ဆင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးသို့ တင်ပို့စဉ် ယင်းနေ့ ည ၇ နာရီခန့်၌ သေဆုံးသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို လှိုင်သာယာမြို့မရဲစခန်းက သေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ် (၆၂/၂၀၁၈) ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged ဓာတ်လိုက်
ယာဉ်သွားလမ်း လမ်းမပေါ်ရှိ ရေအိုင်ထဲ ပြတ်ကျနေသော ဓာတ်ကြိုးကို နင်းမိသည့် အဋ္ဌမတန်းကျောင်းသားတစ်ဦး ဓာတ်လိုက် သေဆုံးမှု တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်တွင် ဇူလိုင် ၁၃ ရက် ညနေက ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဓာတ်လိုက်သေဆုံးသည့် မောင်….(၁၃ နှစ်) သည်
ဘားအံမြို့နယ် သာမညကျေးရွာတွင် ဖုန်းတိုင်ရွှေ့ရာမှ ဓာတ်လိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီး လူငါးဦး သေဆုံး
ကရင်ပြည်နယ် သာမညကျေးရွာ ရေတံခွန်ရပ်ကွက်၌ ဇန်န၀ါရီ ၆ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲခန့်က ဖုန်းတိုင်ရွှေ့ရာမှ ဓာတ်လိုက်မှုဖြစ်ပြီး လူငါးဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း အိန္ဒုနယ်မြေရဲစခန်းမှ သိရသည်။ ၂၀၁၈ ဇန်န၀ါရီ ၆ ရက် နံနက် ၉